စစ်တွေမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
(စစ်တွေ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
စစ်တွေမြို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေးအချက်အချာကျသည့်မြို့ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်တွေခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့လည်းဖြစ်သည်။ စစ်တွေမြို့သည် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၀° ၈' အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် မှ ၉၂° ၅၄' အကြားတည်ရှိသည်။ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်းမှာ (၈၉.၄၂) စတုရန်းမိုင်၊ (၅၇၂၂၈) ဧကရှိသည်။ ရပ်ကွက် (၃၂)ခု၊ ကျေးရွာ အုပ်စု(၃၀)နှင့် ကျေးရွာငယ် (၈၉)ရွာရှိသည်။ စစ်တွေမြို့၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပေါက်တောမြို့နယ်နှင့် ကုလားတန်မြစ်၊ တောင်ဘက်တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ အနောက်ဘက်တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ကြွီတဲမြစ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိကြသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေမှာ (၁၄၇,၈၉၉)ယောက်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပျမ်းမျှ (၁၅)ပေမြင့်သည်။ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်၊ မရမာကြီး၊ ကမန်၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗမာနှင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများနေထိုင်လျက် ရှိသည်။
ကိုဩဒိနိတ်: 20°8′N 92°54′E﻿ / ﻿20.133°N 92.900°E﻿ / 20.133; 92.900
၂၃၁.၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈၉.၄၂ စတုရန်းမိုင်)
ရခိုင်၊ မရမာကြီး၊ ကမန်၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗမာနှင့် ဘင်္ဂလီ
ရခိုင်ဘုရင်များလက်ထက်က စစ်တွေကျွန်းမှာ ဘုရင့်ရေတပ်မတော်မှ စစ်သည်များ၊ စစ်ကဲများ စခန်းချသည့်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့သည် (၁၈၂၆) ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဒေသကို သိမ်းပိုက် ပြီးနောက် မြောက်ဦးမြို့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးအခြေပြုခဲ့ရာ ရာသီဥတုမညီမျှ၍ ရေမြေကောင်းမွန်ပြီး စစ်ရေးစစ်ရာအချက်အချာကျသော ကုလားတန်မြစ်ဝနေရာသို့ ပြောင်းရွေ့အခြေစိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခင်ဘုရင်များလက်ထက်က စစ်တပ်များချခဲ့ရာအရပ်ဖြစ်၍ မူလစစ်တဲဆိုသောဝေါဟာရမှ စစ်တေး၊ ထိုမှ စစ်တွေဟုပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုကြသည်။ တဖန် စစ်တွေမြို့၏ အနောက်ဘက် (၂)မိုင်ခန့်အကွာတွင် အံတော်ဓာတ်ကိန်းဝပ်သည့် စေတီတော်ရှိသည်။ အံတော်ဓာတ်စေတီကို အစွဲပြု၍ အံကျိန်းမှ အာကျိတ်၊ အာကျိတ်မှ အာကျပ်ဟု ပြောင်းလဲလာသည်ဟုဆိုကြသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့က စစ်တွေမြို့ကို (Akyab) အာကျပ်ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်တို့ကမူ စစ်တွေမြို့ဟုသာခေါ်ကြသည်။
စစ်တွေမြို့သည် တောင်ကုန်းများမရှိဘဲ မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်ပေါများကာ မြေမျက်ပြင်ညီညာသည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသဖြစ်သည်။ ပူအိုက်စွတ်စိုသော ရာသီဥတုရှိပြီး အပူဆုံးလမှာ မေလနှင့် ဧပြီလဖြစ်ပြီး အအေးဆုံးလမှာ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှမိုးရေချိန် (၁၉၄.၉၂) လက်မရွာသွန်းသည်။
စစ်တွေမြို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကုန်းလမ်း၊ ရေကြောင်းလမ်း၊ လေကြောင်းလမ်းများဖြင့် ဒေသအသီးသီးသို့ အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်သည်။
စစ်တွေလေဆိပ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၏အဓိကလေဆိပ်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ အမ်းမြို့၊ ကျောက်ဖြူမြို့၊ သံတွဲမြို့၊ မ‌ကွေးမြို့၊ရမ်းဗြဲမြို့တို့နှင့် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ချိတ်ဆက်သွား လာနိုင်သည်။ ထို့ပြင်စစ်တွေလေဆိပ်သည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ အဓိကဝင်ရောက်ရာလေဆိပ်လည်းဖြစ်သည်။
စစ်တွေ−ရန်ကုန်ကားလမ်းသည် (၅၃၄.၃)မိုင် ရှည်လျားပြီး ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြားနှင့် အမ်းမြို့များကို ဖြတ်သွားသည်။ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး ရာသီမရွေးသွားလာ နိုင်သည်။ အမ်း−မင်းဘူးမှတဆင့် ရိုးမအရှေ့ဖက်ခြမ်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးသို့ သွားလာနိုင်သည်။ ထို့ပြင် အမ်းမှတဆင့် ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မအီ၊ သံတွဲ၊ ကျိန္တလီ၊ ဂွ နှင့် တောင်ကုတ်မြို့များ သို့သွားရောက်နိုင်သည်။
ရေကြောင်းခရီးဖြင့် ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး အပါအဝင်မြို့နယ်အားလုံးသို့သွား ရောက်နိုင်သည်။ ကုလားတန်မြစ်ဝတွင်တည်ရှိ၍ စစ်တွေမြို့တွင် စစ်တွေဆိပ်ကမ်း၊ ရွှေမင်းဂံဆိပ်ကမ်း၊ ဆတ်ရိုးကျဆိပ်ကမ်းများတည်ရှိသည်။ စစ်တွေဆိပ်ကမ်းမှာ နိုင်ငံတကာပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာကုန်တင်သင်္ဘောများ၊ ကမ်းရိုးတန်းသွား ခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်သင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်ကြသည်။ ရွှေမင်းဂံဆိပ်ကမ်းမှာ နယ်စပ်ဒေသပို့ကုန်နှင့် သွင်းကုန်များတင်ပို့ရာဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။ ဆတ်ရိုးကျချောင်း အတွင်းရှိ ဆိပ်ကမ်းများတွင် မြို့နယ်ဒေသအသီးသီးမှ ခရီးသည်နှင့်ကုန်တင် သင်္ဘေများလာရောက်ဆိုက်ကပ်ကြသည်။ ဆတ်ရိုးကျချောင်းအတွင်းတွင် စစ်တွေသင်္ဘောကျင်းတည်ရှိသည်။
စစ်တွေမြို့သည် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းရှိသည့်မြို့သည်နှင့်အမျှ ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှု စည်ကားသောမြို့ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အသီးသီးမှ ကုန်စည်များ ဝင်ရောက်ရာမြို့ဖြစ်သလို ကုန်စည်များစီးဆင်းရာမြို့လည်းဖြစ်သည်။ မြို့နယ်လူများမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်သည်ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ရေငံပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စစ်တွေမြို့တွင် ဆန်စက်ကြီးများ၊ ငါး၊ ပုစွန် ကုန်ဝယ်ဒိုင်များ၊ အအေးခန်းစက်ရုံများ၊ ရေခဲစက်ရုံများတည်ရှိသည်။ ငါးပုစွန်များနှင့်လယ်ယာထွက်ကုန်များကို ရွှေမင်းဂံဆိပ်ကမ်းမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ သို့ ရေကြောင်းမှတိုက်ရိုက်တင်ပို့သည်။
ဘဏ်များအနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ ရိုးမဘဏ်၊ အင်းဝဘဏ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ဧရာဝတီဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်များရှိပြီး ငွေကြေးဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
စစ်တွေမြို့တွင် အခြေခံပညာရေး အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်းကျောင်းများ တည်ရှိပြီး၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး အနေဖြင့် စစ်တွေတက္ကသိုလ်၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၊ စစ်တွေနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ စစ်တွေကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် တို့တည်ရှိသည်။ ထို့ပြင် လက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းနှင့် အိမ်တွင်းမှုရက္ကန်းကျောင်းများလည်းရှိ သည်။ 
စစ်တွေမြို့၏ အထင်ကရနေရာများမှာ ဗျူးပွိုင့်၊ စစ်တွေဟိုတယ်၊ လောကာနန္ဒာစေတီ(စစ်တွေ)၊ စစ်တွေလေဆိပ်၊ စစ်တွေဆိပ်ကမ်း၊ လက်ဝဲသလုံးတော်ဓာတ်စေတီ၊ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်၊ ဗုဒ္ဓပြတိုက်၊ ရွှေစေတီကျောင်း၊ ဝင်္ကာဘာကွင်း၊ ပြည်လုံးချမ်းသာဘုရားကြီး စသည့်နေရာများ ဖြစ်သည်။ စစ်တွေမြို့၏ အဓိကလမ်းများမှာ လမ်းမကြီး၊ မင်းဘာကြီးလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်း တို့ဖြစ်သည်။
↑ (မေ ၂၀၁၅) သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ, ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အတွဲ-၂. နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန, ၅၉။
↑ မောင်ကောက်စံ (၂၀၀၈). ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုစီးပွားပထဝီဝင်။
↑ စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၄)၊ အပိုင်း(က)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စစ်တွေမြို့&oldid=472459" မှ ရယူရန်
၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၀၄:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။